Google oo New York ka dhiseysa xarun cusub oo ku kici doonta $1 Bilyan oo dollar - Halbeeg News
Google oo New York ka dhiseysa xarun cusub oo ku kici doonta $1 Bilyan oo dollar
Shirkada Google waxa ay magaalada New York ka dhiseysaa xarun aad u ballaaran oo ay ku kacayso lacag gaareysa hal bilyan oo dollarka Mareykanka , xatuntan ayaa hirgelinaya xaafadda West Village ee Degmada Manhattan.
Google waxa ay horay magaalada New York ugu laheyd dhisme aad u ballaaran oo ku yaalla degmada Manhattan balse waxa ay markaan dooneysaa in ay sii ballaariso jiritaankeeda Magaalada New York oo ah xarunta ganacsiga adduunka.
Mishiinkan wax laga baarto ee Google ayaa maanta oo Isniin aheyd soo bandhigay qorshahooda ku saabsan dhisme cusub oo Hal Bilyan oo Dallarka Mareykanka ah ku kacaya oo laga dhisi magaalada New York.
Ruth Porat, madaxa maaliyadda ee Shirkadda Google ayaa sheegtay in dhismaha cusub oo uu badkiisu la egyahay 1.7 milyan oo fiid laba jibbaaran ayaa loo bixin doonaa magaca Google Hudson Square.
Ku dhawaaqista mashruucan cusub ayaa kusoo aadeysa kadib markii bishii Maarso ee la soo dhaafay ay ku iibsatay suuqa Chelsea ee Manhattan lacag gaareysa $2.4 Billion oo dollar.
Khamiistii la soo dhaafayna shirkadda Apple ayaa ku dhawaaqday in ay gobolka Texas ka dhiseyso xarun cusub oo ay ku bixi doonto lacag dhan hal bilyan $1 Bilyan oo dollarka Mareykanka ah taasi oo qeyb ka ah qorshaha ballaarinta shirkadda.
Maxkamadda gobolka Banaadir oo wasiir ku xigeenkii arrimaha dibadda ku xukuntay ganaax lacageed
Hay'adda cilmibaarista Sahan oo shaqadii laga hakiyay, eedeymo la xiriira amniga qaranka awgood